Global Voices teny Malagasy · 20 Febroary 2018
20 Febroary 2018
Tantara tamin'ny 20 Febroary 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana20 Febroary 2018
Azia Atsinanana20 Febroary 2018
Na dia vitsy aza ireo Japoney miaina ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia, maro ireo mponina ao an-toerana no nandray anjara tamin'ny fety faharoa fankalazana ny Sakura isan-taona - fety natokana ho an'ireo voninkazon'ny serizy ao Skopje, renivohitr'i Makedonia. Nampidirin'ireo mpikarakara ny fety ireo dojos fanaovana fanatanjahantena haiady, ary vao haingana ireo...
Tsy toy ny tany amin'ireo firenena hafa nolalovany, tsiky fotsiny no azon'ny Fanilo Olaimpika androany tao Makaô, ny dingany farany mialoha an'i Shina Tanibe. Efa nahavita nitondra ny Fanilo manerana ny tanàna tsy nisy mpanakantsakana ireo mpihazakazaka. Mifanohitra amin'izay kosa, tamin'ny alalan'ny fanofahofana ireo saina dia tena notehafan'ireo mpijery ilay...
Tajikistan: Ny Herin'ny Fosafosa
Azia Afovoany sy Kaokazy20 Febroary 2018
Marobe ireo media manana lahatsoratra vonona miaraka amin'ireo hevitra samihafa sy ireo tranga samihafa, samy manisa andro miandry izay haha-marina na tsia ireo honohono.
Karaiba20 Febroary 2018
Amerika Latina20 Febroary 2018
Skypecast: Atoa Brown Avy Any Singapaoro
Ny hafatro lehibe indrindra? Tsy voatery ho matotra foana ianao mba handresy lahatra ny olona!